ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမယ့် ကင်ဆာကိုသတ်တဲ့အရွက် – Myanmar Magazine
December 29, 2018 myanmarmagazine	ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ
မိတ်ဆွေတွေသူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တချိုသော မိသားစုဝင်တွေဟာ ကင်ဆာတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ ခပ်စိတ်စိတ်ကြားလာရတာများတော့ကင်ဆာလူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တဲ့ တင်ပြီးသားပို့စ်ကို ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ကိုကိုယ်တိုင်အခြောက်လှန်းပြိး ကြိပ်ထားပုံကိုလည်းပြပေးထားပါတယ် ။
နေရောင်မှာ ၄ရက်လောက်လှန်းထားရင်အရွက်တွေကတော့ခြောက်သွားပါတယ်။လူနာတွေအတွက် အစာသိတ်မခြေနိုင်ရင်အရွက်တွေကိုသောက်မဲ့အစား အမှုန့်ကို ၁၀မိနစ်လောက်ရေနွေးနဲ့စိမ်သောက်လိုက်တော့ အဆင်ပြေမယ် လို့ ယူဆလို့ ပါ ။အာနိသင်အားလုံးလည်း ရသွားနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အရွက်မှာပါတဲ့ ပိုးမွှားလည်းသေသွားနိုင်ပါတယ် ။
နေလှန်းပြီးရင် အရွက်တွေကို သီးခြားချွေပါ သီးခြားကြိပ်ပါ အတူတူမကြိပ်ပါနဲ့ ။အရိုးအတံကိုသပ်သပ်ထားပါ။ သပ်သပ်ကြိပ်ပါ ။အရိုးတံတွေက ခြောက်ဖို့အချိန်ကြာနိုင်တာမို့ရောကြိပ်လိုက်၇င် စိုထိုင်းမူ့ ကြောင့်မှိုတက်နိုင်ပါတယ် ။သင်္ဘောရွက်ဟာကင်ဆာရောဂါပိုးကိုသတ်နိုင်တယ်လို့ ဗီယက်နမ်ကတိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးကဆိုပါတယ် အူကင်ဆာဖြစ်နေသူတွေကို စမ်းသပ်ပြီးတိုက်ခဲ့ရာမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာတွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း ကင်ဆာသမားတွေအတွက် ညွန်းထားတဲ့ အရွက်တွေထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ပါဝင်ပါတယ် ။မိမိတို့ ရဲ့ လက်လှမ်းမှီရာမှာ သင်္ဘောရွက်တွေကို အလွယ်တကူရှာတွေ့ နိုင်သလို ကင်ဆာမဖြစ်သေးရင်တောင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သောက်သင့်တာပါ ။
ဘာကြောင့်ကြိုတင်သောက်သင့်သလဲဆိုတော့ !!!ပြုပြင်ပြီး အစားအသောက်များ( Processed Food ) ပြုပြင်ပြီးအသားများ( Processed meat )၀က်အူချောင်း ကြက်အူချောင်းလို အစားအသောက်များ ရယ်ဒီမိတ် အသင့်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်များမှိုတက်နေမှန်းမသိတဲ့အစားအသောက်များ ဒီတ်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်များ ။
ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းထားတဲ့အစားအသောက်များ အရွက်အသီးများ တာရှည်ခံဆေးများထည့်ထားတဲ့အကြော်အလှော်အစားအသောက်များဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက်များကို မြန်မာပြည်သူလူထုအတော်များများက ကင်းလို့ ရမယ်မထင်ပါ ဒီအတွက် သောက်ထားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။
( ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ ၉၀ % ကနေ ၉၅ % သောကင်ဆာတွေဟာ အစားအသောက် အနေအထိုင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် )ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ လူတိုင်းမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆဲလ်တွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ခုခံအားကစဉ်ကလျားဖြစ်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းဟာကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ကြတာပါ ။
သင်္ဘောရွက်သောက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ !!!(ဘယ်လိုသောက်သင့်လဲလို့ မေးမြန်းလာသူတွေအတွက်ပါ)
(၁)သင်္ဘောရွက်အစိမ်း တွေကို ကြိပ်ပြီးတော့လည်းအရည်ကိုသောက်နိုင်ပါတယ် ။
(၈) အစာမစားခင်ဖြစ်ဖြစ် အစာစားပြီးဖြစ်ဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။မိမိအဆင်ပြေသလို သောက်နိုင်ပါတယ် ။
သဘောင်္ရွက်ဟာ ကင်ဆာအပြင် တခြားအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွက် အစာချေစံနစ်ကောင်းမွန်တာအပါအ၀င် ယားယံတဲ့အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနာတွေ ကင်ဆာဘက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တခြားအဖုအကြိတ်အခဲတွေအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ကိုလက်စထရောတက်နေတာတွေကိုကျစေပါတယ် ။ သဘောင်္ရွက်ဟာ ရောဂါ အတော်များများအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် ။သဘောင်္ရွက် သဘောင်္သီး အပွင့် အမြစ် အားလုံး ဟာဆေးဘက်ဝင်လို့ ဆိုပါတယ် ။ သဘောင်္ရွက်မှာ antioxidants တွေပါဝင်ပါတယ် ။
ခန္တာကိုယ်မှာ အလုံး များ အကြိတ်များရှိတဲ့သူများ ကြိုတင်သောက်ထားပါ ။မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာပြီးရောဂါဘယများကင်းဝေးကြပါစေ။
← ဘုန်းကြီးဝတ်တွေနဲ့ မန်းမှာ အလှူလာခံတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ ဦးကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး
ဘုရားဖူးကား တိမ်းမှောက် ဒဏ်ရာရ လူနာများပြားနေ →
December 3, 2018 myanmarmagazine Comments Off on အမျိုးသမီးတိုင်းသိထားသင့်သည့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အစပျိုးခြင်း လက္ခဏာများ